Ny milina fametahana ary ny mpamatsy, ny famokarana ary ny mpamatsy
Ampiharina amin'ny lalamby maivana, fiara ambany rihana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala ary tram, ny haben'ny fonony farany dia mihoatra ny iray hetsy isan-taona; manokana ho an'ny mpanjifa, nomenay ho an'ny lamasinina Bombardier (Sina & Europ), skoda (Czech), China.
Ampiharina amin'ny lalamby maivana, fiara ambany rihana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala ary tram, ny haben'ny zana-ketsa dia mihoatra ny arivo arivo isan-taona; manokana ho an'ny mpanjifa. Nanome ho an'ny lamasinina Bombardier (Sina & Europ) izahay, skoda (Czech), Sina.
Ampiharina amin'ny lalamby maivana, fiara ambany rihana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala ary tram, ny habetsaky ny flanges dia mihoatra ny iray hetsy isan-taona; manokana ho an'ny mpanjifa, nomenay ho an'ny lamasinina Bombardier (Sina & Europ), skoda (Czech), China.